China Belt အမျိုးအစားကွန်ကရစ်အသုတ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ရှန်တီ
၎င်းစက်သည် Batching System၊ အလေးချိန်စနစ်၊ ရောစပ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၊ အဆုတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်းအမှုန့်များ၊ အရည်ထပ်ပေါင်းထည့်သည့်ရေနှင့်ရေကိုစက်ရုံမှအလိုအလျောက်ချုံ့နိုင်သည်။
၎င်းစက်သည် Batching System၊ အလေးချိန်စနစ်၊ ရောစပ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၊ အဆုတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်းအမှုန့်များ၊ အရည်ထပ်ပေါင်းထည့်သည့်ရေနှင့်ရေကိုစက်ရုံမှအလိုအလျောက်ချုံ့နိုင်သည်။ Aggregates မ်ားကို front loader မှစုစုပေါင်းဘင်အဖြစ်သို့တင်ခဲ့သည်။ အမှုန့်ကို silo မှနေ၍ ဝက်အူပို့စက်ဖြင့်အလေးချိန်သို့ပို့သည်။ ရေနှင့်အရည်ထပ်ပေါင်းများကိုချိန်ခွင်သို့တင်ရသည်။ အလေးချိန်စနစ်အားလုံးသည်အီလက်ထရောနစ်အကြေးများဖြစ်သည်။
ကွန်ကရစ်အမျိုးမျိုးကိုရောနှော။ အလတ်စားဆောက်လုပ်ရေးနေရာများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဆည်မြောင်း၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်း၊ တံတားများနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားရှိသောစက်ရုံများအတွက်ကွန်ကရစ်ကြို။ ဆောက်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
1.Modular ဒီဇိုင်း, အဆင်ပြေတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် disassembly, အစာရှောင်ခြင်းလွှဲပြောင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် layout ကို။
2.Belt ပေါ်ကိုတင်သည့်အမျိုးအစား၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်မှု၊ စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှု Hopper, မြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားတပ်ဆင်ထားသည်။
3.Powder အလေးချိန်စနစ်သည်မြင့်မားသောတိုင်းတာခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ခိုင်မာသော anti-interference စွမ်းရည်ကိုသေချာစေရန် pull rod ချိန်ခွင်လျှာဖွဲ့စည်းသည်။
၄။ ကွန်တိန်နာအမျိုးအစားပုံစံ၊ လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြုတ်တပ်ခြင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သီအိုရီဆိုင်ရာကုန်ထုတ်စွမ်းအားm³ / h 60 90 120 180 240 270
အရောအနှော mode ကို JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
မောင်းနှင်နိုင်စွမ်း （Kw） 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75
အားသွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ （L） 1000 1500 2000 3000 4000 4500
မက်စ် စုစုပေါင်းအရွယ်အစားကျောက်စရစ်ခဲ / ကျောက်စရစ်ခဲမီလီမီတာ） ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Batching bin Volume ကိုm³ 3X12 3X12 4X20 4X20 4X30 4X30
ခါးပတ်ခံစက်စွမ်းရည် t / h 200 300 400 600 800 800
အကွာအဝေးနှင့်တိုင်းတာခြင်းတိကျမှု စုစုပေါင်းကီလိုဂရမ် 3X
（၄၀၀၀ ± ၂%）
ဘိလပ်မြေကီလိုဂရမ် 500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± ၁% 2000 ± 1% 2500 ± 1%
ပြာကီလိုဂရမ်ပျံသန်းပါ 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 800 ± 1% 900 ± 1%
ရေကီလိုဂရမ် 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 800 ± 1% 900 ± 1%
အပိုဆောင်းကီလိုဂရမ် ၂၀ ± ၁% ၃၀ ± ၁% 40 ± 1% ၆၀ ± ၁% 80 ± 1% 90 ± 1%
အမြင့် marging44 ၄.၂ ၄.၂ ၄.၂ ၄.၂
စုစုပေါင်းပါဝါ KW 100 150 200 250 300 300
ခါးပတ်ကွန်ကရစ် Batching စက်ရုံသတ်မှတ်ချက်
Belt Conveyor ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ထုတ်လုပ်သူ
1. အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ အကူးအပြောင်းမြင့်မားခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောပုံစံဒီဇိုင်း၊ 3. စစ်ဆင်ရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ၅။ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စနစ်သည်အဆင့်မြင့်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် M ...